गोल्डेन ग्लोब्स र यौन हिंसा- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
गोल्डेन ग्लोब्स अवार्डमा यसपटक जुन फिल्म मोसन पिक्चर्स (ड्रामा) तर्फ उत्कृष्ट घोषित भयो, त्यसको कथाको अन्तर्यमा बलात्कार र महिलामाथिको विभेद लुकेको छ ।
काठमाडौँ — बितेको वर्ष हलिउडमा फिल्म, कलाकारका सम्बन्ध र बक्स–अफिसले मात्र चर्चा पाएन, हिरोइनले भोगेका यौन दुव्र्यवहारले पनि हलचल मच्चायो । एम्मा एमास्टोन, सल्मा ह्यागजस्ता सुपरस्टारहरूले आफूमाथि भएका यौन हिंसाबारे मुख खोले । हलिउडका ठूला निर्माता केविन स्पेस र हार्वी विस्टिनलाई बलात्कार र दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो ।
यसले सभ्य र व्यावसायिक छवि बनाएको हलिउडभित्रको अँध्यारो पक्षलाई सतहमा ल्याइदियो । सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक फोरममा सेलिब्रिटीहरूले यो प्रवृत्तिका विरुद्ध आक्रोश पोखे । यसैको प्रभाव देखियो, गोल्डेन ग्लोब्स अवार्डको ७५ औं संस्करणमा ।
कुन अवार्ड कसले पाए, कुन सेलिब्रिटीले कस्तो पहिरन लगाए ? खोजीनीति हुनुपर्ने हो तर त्यसलाई साँच्चै छायामा पारिदियो, यौन उत्पीडनविरुद्धको सामूहिक आवाजले । आखिर हलिउडको अवार्ड इतिहासमै यौन शोषणको सवालले पहिलोपल्ट प्रवेश पायो । गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड आइतबार बेभर्ली हिल्समा सम्पन्न भयो । गोल्डेन ग्लोब्सलाई फिल्म जगत्मा ओस्कारपछि दोस्रो प्रतिष्ठित अवार्ड मानिन्छ ।
अर्को रोचक संयोग के भने, यस पटक जुन फिल्म मोसन पिक्चर्स (ड्रामा) तर्फ उत्कृष्ट घोषित भयो, त्यसको कथाको अन्तर्यमा बलात्कार र महिलामाथिको विभेद लुकेको छ । फिल्म हो, ‘थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिङ, मिजौरी’ । छोरीको हत्यारालाई सात महिनासम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेपछि आफैं हत्याराको खोजीमा लाग्ने आमाको संघर्षशील यात्रा हो यो फिल्म । हत्या अगाडि छोरीको बलात्कार गरिएको हुन्छ । त्यसैले आमा अझ
तड्पिएकी हुन्छिन् तर प्रहरीले आनाकानी गर्छ । त्यसपछि उनी तीन ठूला होडिङबोर्ड राखेर हत्यारा पत्ता लगाउन आफैं लाग्छिन् ।
यो साहसिक आमाको भूमिकामा देखिएकी थिइन्, फ्रान्सेस म्याकडरम्यान्ड । यही भूमिकाले उनलाई उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड दिलायो । हाम्रो सन्दर्भमा सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड चुमेकी फ्रान्सेसको उमेर ६० पुगेको छ । उनले सन् १९९६ मै फर्गोबाट ओस्कार जितेकी थिइन् । उनी प्राय: महिला सशक्तीकरणको सवाल उठाइएको फिल्ममा देखा पर्छिन् ।
बिलबोर्ड्सबाटै यसपटक गोल्डेन ग्लोब्समा साम रकवेलले उत्कृष्ट सहअभिनेता र मार्टिन म्याकडोनाले उत्कृष्ट पटकथाको अवार्ड हात पारे । मार्टिन फिल्मका निर्देशक पनि हुन् । यो संस्करणमा चार अवार्ड जित्ने फिल्म बिलबोर्ड्स मात्र हो । ‘द डार्केस्ट आवर’ बाट ग्यारी ओल्डम्यान उत्कृष्ट अभिनेता घोषित भए भने ‘द सेप अफ वाटर’ बाट गुइलेर्मो देल्टोरो उत्कृष्ट निर्देशक । म्युजिकल र कमेडीतर्फको उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड चाहिँ ‘लेडी बर्ड्स’ लाई दिइयो ।
यसपटक एक भारतीय अभिनेता पनि उत्कृष्ट ठहरिए । अजिज अन्सारीले म्युजिकल–कमेडीतर्फ टेलिभिजन सिरिज ‘द मास्टर अफ नन’ बाट अवार्ड चुमेका हुन् । गोल्डेन ग्लोब्समा फिल्म र टेलिभिजन सिरिजमा ड्रामा र म्युजिकल–कमेडी विधातर्फ दुई दर्जन अवार्ड प्रदान गरिन्छ ।
प्रसंग फेरि यौन हिंसाविरुद्धको आवाजले अवार्डमा पाएको प्राथमिकताकै । त्यसका लागि सुरुमा लोकप्रिय मिडिया पर्सनालिटी तथा अभिनेत्री ओपरा विन्फ्रे अगाडि आउँछन् । यसपटक उनलाई फिल्म तथा टेलिभिजनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप ‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरियो । यो अवार्ड पाउने उनी पहिलो ‘ब्याल्क वुमन’ हुन् । र, यौन दुव्र्यवहारको विपक्षमा सबभन्दा खरो अभिव्यक्ति दिने पनि उनै थिइन् ।
६३ वर्षीया विन्फ्रेले हलिउडमा जारी यौन उत्पीडनको बहसलाई अगाडि बढाएको मिडियालाई धन्यवाद दिँदै भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा ‘मी टु’ र ‘टाइम्स अप’ जस्ता पहल सुरु भयो । यस्तो माहोल बनिरहेको छ, जहाँ महिलालाई ‘मी टु’ बोल्ने अधिकार छ अनि पुरुष सुनिरहेका छन् ।’ उनी यत्तिमै रोकिइन्न । अगाडि थपिन्, ‘यो लडाइँ हलिउडमा सीमित छैन । यस्ता कैयौं महिला छन्, जसले अधिकारका लागि लडाइँ लडे, तर उनीहरूको नाम कहिले अगाडि आएको छैन ।’ उनले महिला समानतालाई संकेत गर्दै ‘एउटा नयाँ दिन क्षितिजमा आएको छ’ भन्दा अवार्ड समारोहमा तालीको गडगडाहट भएको थियो ।
त्यसो त विन्फ्रे मात्र होइन, निकोल किडम्यान, लायरा ड्रेन, बारबरा स्ट्रेन्डलगायत सेलिब्रिटीले पनि महिलामाथि हुने यौन हिंसा र विभेदको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । आयोजकको चाह नै यही अभियानलाई तीव्रता दिने रहेको थियो । त्यस्तै, एकपछि अर्को विवादमा फसिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति पनि हलिउडकर्मीले रोष पोखे, नारीको खिल्ली उडाउने उनका विभिन्न हर्कतका कारण । अधिकांश सेलिब्रिटी कालो पहिरनमा उपस्थिति हुँदा समारोह नै आकर्षक बनेको थियो । त्यसको उद्देश्य उही थियो, यौन दुव्र्यवहार विरोध ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०८:०२
दाजु मार्कले जसरी ब्यान्ड चलाए, त्यसमा भाइ डेविडलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले पनि ब्यान्ड फेरि सक्रिय हुन सकिरहेको छैन ।
काठमाडौँ — हामी त डायर स्ट्रेरट्सका गीतका प्रशंसक हौं,’ भन्नेहरू कति धेरै भेटिन्छन् भने त्यसलाई गनेर साध्य हुन्न । हुन पनि यस ब्रिटिस ब्यान्डले एकसे एक राम्रा गीत दिएका छन् र यी गीतलाई जति सुने पनि पुग्दैन ।
आखिरमा पश्चिमेली गीत सुन्नेले ‘मनि फर नथिङ’ सुनेको छैन भन्छ भने त्यो कसरी हुन सक्छ र ? डायर स्ट्रेट्सका वास्तवमै धेरै चलेका गीत छन्, जस्तै अरू केही उदाहरण, ‘सो फार अवे’, ‘वक अफ लाइफ’, ‘टनेल अफ लभ’, ‘सुल्तान अफ स्विङ्स’, ‘ब्रर्द इन आर्म्स’ ।
यी गीतहरू अहिले पनि जति नै दोहोर्‍याएर सुनिए पनि उत्तिकै राम्रा लाग्छन् । एउटा तथ्य ब्यान्डले नयाँ गीत बनाउन छाडेको कति भयो त ? विश्वास नहुन सक्छ, सन् १९९५ देखि ब्यान्डले केही नयाँ सिर्जना गरेको नै छैन । सन् १९७७ मा लन्डनमा ब्यान्डको स्थापना भएको थियो, १९८८ सम्म खुबै सक्रिय रह्यो । त्यसपछि केही सेलाएको डायर स्ट्ेरट्स फेरि सन् १९९१ देखि १९९७ सम्म व्यस्त रह्यो । तर त्यसपछि गुपचुप भएको ब्यान्डले फेरि जुरमुराउने प्रयास नै गरेन ।
डायर स्ट्ेरट्सका फ्रन्टम्यान हुन्, मार्क नोफ्लर । उनले आफ्ना भाइ डेविड नोफ्लरसँग मिलेर डायर स्ट्ेरट्स बनाएका थिए र यो रक ब्यान्ड सनसनी नै सावित भयो । उनीहरूको सबैभन्दा बढी चलेको एल्बम हो, ‘ब्रदर्श इन आर्म्स’ । यी दुई दाजुभाइ एक समय खुबै मिल्थे, त्यसैले पनि यो एल्बमको नाम जुरेको मानिन्छ । त्यसैले पनि कोही दुई मिल्ने साथीले धेरै राम्रो काम गरेको छ भने ‘ब्रदर्श इन आर्म्स’ भन्ने गरिन्छ, विशेषत: क्रिकेटमा ।
आखिरमा ब्यान्ड वास्तवमै सक्रिय हुन छाडेको दुई दशकभन्दा बढी समयपछि यो सबै चर्चा किन त ? भर्खर ब्यान्डलाई ‘रक एन्ड रोल हल अफ फेम’ मा समावेश गरिएको छ र यसको सम्मानको कार्यक्रम पनि हुँदै छ । तय छ, यो उपलब्धि हात पार्नेले त्यस कार्यक्रममा केही न केही त प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रश्न, के डायर स्ट्ेरट्सले यो काम गर्नेछ त ? फ्रन्टम्यान मार्क नोफ्लर यसका लागि तयार हुनेछन् त ? अथवा भनौं, ब्यान्डको रि–युनियन हुन सक्नेछ त, छोटै समयका लागि ।
ब्यान्डले तय गरेको बाटोमा यसका धेरै सदस्य भए, अहिलेसम्म ब्यान्ड सदस्यको संख्या नौ पुगिसकेको छ, केही आए, फेरि गए । सुरुदेखि रहेकामा दुई नोफ्लर दाजुभाइसँगै बास गितारिस्ट जोन इस्ली पनि हुन् । खासमा उनी नै हुन्, ब्यान्डलाई फेरि सक्रिय बनाउन प्रयास गरिरहेका । ब्यान्ड ‘रक एन्ड रोल हल अफ फेम’ मा परेयता त उनले मार्क नोफ्लरलाई नै सीधा इंगित गर्दै भनेका छन्, अब त मिलौं न । आखिरमा यिनै गायक विना डायर स्ट्रेट्स कसरी सम्भव हुन सक्छ र ?
साँचो तथ्य के हो भने पछिल्ला केही वर्षयता दुई नोफ्लर दाजुभाइबीच मेल छैन, अझ भनौं, बोलचाल नै छैन । दाजु मार्कले जसरी ब्यान्ड चलाए, त्यसमा भाइ डेविडलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले पनि ब्यान्ड फेरि सक्रिय हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि मार्कको जिद्दी । उनी एक प्रकारले डायर स्ट्ेरट्सलाई इतिहासमै सीमित राख्न चाहन्छन्, फेरि ब्युँझाउन चाहँदैनन् । उनको भनाइ छ, आखिरमा ब्युँझाएर के नै अर्थ छ र ? इस्लीले उनलाई सम्झाउन सके, राम्रो हुँदो हो । फेरि कालजयी केही सुन्न पाइनेछ, डायर स्ट्ेरट्सबाट ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०८:००